watchOS - iPhone News | Vaovao IPhone
watchOS no anaran'ny rafitra fiasa Apple Watch, ilay famantaranandro marani-tsaina paoma izay milaza ho famenon-tsakafo tonga lafatra amin'ny iPhone isan'andro isan'andro. Toa ny iOS, ny WatchOS koa dia mahazo fanavaozana tsy tapaka izay manatsara ny endrika Apple Watch ary manamboatra bug.
watchOS 2, ny tsara indrindra amin'ny Apple Watch
Natolotra tao amin'ny WWDC 2015, watchOS 2 Tonga amin'ny fanatsarana be ny endri-javatra amin'ny Apple Watch. Anisan'ireo zava-baovao lehibe ananany, hitantsika fa manome ny fahafaha-mamorona rindran-tany zanatany izy io, ny mety hametrahana kaody hidin-trano hisorohana ny halatra, fomba vaovao hampiasana azy io ho toy ny famantaranandro eo amin'ny latabatra raha mamaly ny tontolon'ny Apple Watch na sehatra mavitrika sy azo ovaina.
Jereo daholo ireo inona no vaovao amin'ny watchOS ho an'ny Apple Watch sy ireo hafetsena rehetra.
WatchOS 4 developer beta 7.1 dia misy amina kinova roa samihafa izao
ny Angel Gonzalez hace 7 volana .
Andro vitsy lasa izay dia nampahafantarinay anao ny fanombohana ny beta 4 an'ny iOS 14.2 tsy misy vaovao miseho afa-tsy ireo efa ...
Apple dia mamoaka ny betas voalohany an'ny iOS sy iPadOS 14.2, watchOS 7.1 ary tvOS 14.2
ny Angel Gonzalez hace 8 volana .
Vao iray andro lasa izay dia nanapa-kevitra i Apple fa handefa amin'ny fomba ofisialy ny kinova vaovao an'ny iOS, tvOS, watchOS ...
watchOS 7 dia hamela anao hanova ny tanjon'ny peratra fanatanjahan-tena sy mijoro
Omaly tamin'ny famelabelarana "Times Flies" dia nanambara i Apple fa anio dia hanana fanavaozam-baovao ho an'ny iOS 14, iPadOS 14, tvOS ...
Fanasana tanana, zava-dehibe kokoa noho izay mety ho izy
ny Luis Padilla hace 10 volana .
Apple dia nampiditra tamin'ny WWDC farany teo ny endri-javatra vaovao ho an'ny Apple Watch amin'ny alàlan'ny fanavaozana ny WatchOS 7: ny…
Ny mpahay fiambenana dia mampiseho amintsika ny mety hisian'ny fahasarotana amin'ny watchOS
ny Luis Padilla hace Taona 1 .
Ny Apple Watch dia fitaovana nivoatra be hatramin'ny nanombohany, ary mbola ...
Tracker amin'ny torimaso Apple Watch ho avy hita: kalitaon'ny torimaso, fitantanana bateria, sns.
Tracker amin'ny torimaso Apple Watch ho avy hita: kalitaon'ny torimaso, fitantanana bateria, sns. Androany, 9to5Mac dia…
Apple dia nanatsara ny fanatanjahan-tena WatchOS 6 amin'ny alàlan'ny fanaovana azy ireo tsy hiankina amin'ny iPhone
ny Karim Hmeidan hace 2 taona .
Tamin'ity herinandro ity dia hitantsika ny fomba namoahan'ireo tovolahy avy any Cupertino ny betas an'ny besinimaro an'ny rafitra fiasa manaraka ho an'ny fitaovana Apple, ...
Ity no watchOS 6 vaovao ho an'ny Apple Watch
ny Nacho Aragonés hace 2 taona .
Rehefa avy nanolotra ny tvOS 13 vaovao i Apple dia nanolotra ny watchOS 6 vaovao ho an'ny Apple Watch misy vaovao ao ...
macOS dia hampiasa ny Apple Watch ho rafitra fanamarinana
ny Luis Padilla hace 2 taona .
Nandritra ny roa taona izao dia afaka mampiasa ny Apple Watch isika hanokafana ny fotoanantsika amin'ny macOS tsy mila ...
Ny beta voalohany iOS 12.1.2, watchOS 5.1.3 ary tvOS 12.1.2 dia efa misy izao
Ireo tovolahy avy any Cupertino dia nanomboka ny milina beta ary nandefa ny beta voalohany an'ny ...
Ny watchOS 5.1.2 vaovao dia hanampy mpanera Walkie-Talkie ao amin'ny Center Control
Isaky ny manana fitaovana bebe kokoa avy amin-dry zalahy avy any Cupertino izahay, fa ny marina dia raha misy iray izay ...